I-Potosi Hot Springs kanye neKhabhinethi Eqashisayo ye-TROUT CABIN - I-Airbnb
I-Potosi Hot Springs kanye neKhabhinethi Eqashisayo ye-TROUT CABIN
Pony, Montana, i-United States
U-Hannah uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
NQAMULA ukuze RECONNECT
I-Potosi Hot Springs itholakala kumakhilomitha angu-6.6 ngaphandle kwasePony, MT. Kunamakhabethe angu-4 (amakhabhini alala abantu abangafika kwabayisi-6) atholakala eduze kwase-S Willow Creek ukuze kudotshwe khona ukudoba ngaphandle komnyango wakho. Njengoba izungezwe yi-National Forest, kunemizila engapheli yokuhamba izintaba. Buya ohambeni lwakho futhi ucwile eziphethwini ezishisayo (kugcinelwe izivakashi kuphela). Ichibi elikhulu lihlala endaweni engaba ngu-93 degrees eduze kweSauna evuthayo izinkuni. Khuphuka umzila oya kubhavu wasendlini ohlala cishe kuma-degree angu-102.
Amanzi esiphethu sasePotosi angamanye ahlanzekile kakhulu emhlabeni. Igcwele amaminerali enza ukubhukuda okuphumuzayo noma ukucwilisa. Lapha, ungakwazi ngempela ukunqamula ukuphithizela nokuphila kwansuku zonke. Xhumana kabusha nawe, imvelo kanye nalabo okhetha ukubaletha ohambweni lwakho lokuya ezintabeni zase-Montana.
I-Potosi ingamahektha angama-75 obuhle nokuphumula ezungezwe kuwo wonke amakhona yihlathi lezwe. Omakhelwane bethu yizinyamazane, izinyamazane, izinyamazane, amabhere, izimpungushe, izinkemba nezingungumbane.
Sihlala endlini enkulu futhi ngilapha izivakashi zethu. Ngena emnyango oseceleni phakathi namahora okungena athunyelwe.
Hlola ezinye izinketho ezise- Pony namaphethelo